Jiri usoro kacha mma YouTube na-ebuli channelụ na vidiyo gị kacha mma maka uto ahịhịa na-enweghị ịzụta mgbasa ozi! Anyị bụ ndị Google nyere nkwado maka Uto YouTube Channel & mara ihe ọ chọrọ ịme!
Anyị maara ka esi arụ na YouTube!
Anyị YouTube ndị ọkachamara ndị ọkachamara YouTube na-eme YouTube SEO kemgbe 2011. Anyị maara atụmatụ kachasị mma na nke kachasị arụ ọrụ na-enye nsonaazụ. Anyị ga-enyocha ọwa gị na vidiyo gị n'ụzọ zuru ezu, wee nye gị ntuziaka akọwapụtara nke ọma, nkọwa zuru oke ma dị mfe iji bulie ya elu ma bulie elu na nsonaazụ ọchụchọ. Nke a na - eduga na ịzụ ahịa sitere na ndị na - ekiri ihe kachasị mkpa - ndị na - eme ihe ndị ahụ.
Nyocha YouTube Channel FAQ
Nwere ike ịnye nyocha ọwa na Channels YouTube na-abụghị Bekee?
Pụrụ Inye Ọrụ Ndị a Na Channel YouTube Na-abụghị Bekee?
Ogologo oge ole ka ị ga-edekọ onwe gị na-atụle ọwa m?
Vidio ị ga-enweta n’aka anyị ga-abụ nkeji iri anọ na ise + juputara na nghọta bara uru na ọwa YouTube gị.
YouTube vidiyo SEO Ajụjụ
Kedụ ka isi isiokwu, nkọwapụta na isi okwu / Hashtags nwere ike isi nyere aka bulie ọwa m?
Anyị na-eji nchikota nke omume kacha mma na adịchaghị nyocha ngwaọrụ iji nye gị aha, Nkọwa na Keywords / Hashtags nke ga - enyere gị aka ịkwado nke ọma, lelee ndị ọkachamara ọzọ ma bulie vidiyo gị pịa-thru-rate (CTR).
You Chọrọ My YouTube Channel Nbanye Nzere?
Mba, anyị achọghị nzere nbanye gị. Anyị anaghị abanye na ọwa YouTube gị. Kama nke ahụ, anyị na-enye gị akwụkwọ zuru ezu ma dịkwa mfe nghọta ka ị nwee ike mejuputa aro ndị a na-atụkarị. Ọ dị mfe na ị ga-achọ ịmejuputa mgbanwe ndị ahụ n'onwe gị, ebe ọ ga - enyere gị aka ịmụta ma too dị ka YouTuber.
Nwere Ike Workrụ Ọrụ Na Typedị YouTube Channel Ọ bụla?
Ee na Mba Ka anyi kowaa tongue Asusu ala nna anyi bu bekee. Ebe ọ bụ na anyị chọrọ ịnye gị ọrụ kachasị mma kachasị mma enwere ike, anyị dị mwute ikwu na enweghị ike ịnye gị nyocha SEO na asụsụ ọzọ.
Agbanyeghị… anyị nwere ike ịnyefe gị ọrụ anyị na Bekee, ị nwere ike iji Google Translate gbanwee ya n'asụsụ gị. Google Translate na arụ ọrụ ịtụgharị asụsụ nke ọma, yabụ ị ga-enwe ike irite uru dị ukwuu na ọrụ ndị a, ọbụlagodi na ọwa gị dị n'asụsụ ọzọ.
Ogologo oge ole ka usoro a dum na-ewe?
Ọ nwere ike ịdị iche na-adabere na ebumnuche gị. Na mkpokọta, mgbe itinye n'ọrụ aro anyị, ị ga-ahụ nwayọ nwayọ n'oge ọnwa mbụ n'ihi na YouTube anaghị emelite nsonaazụ ozugbo. Mgbe ahụ, maka ọnwa ndị na - aga n'ihu, ike ahụ ga - eburu ma gaa n'ihu na - eburu ọnwa n'ọnwa. Ọ dị ka ụgbọ njem… pụta ga-amalite nwayọ nwayọ, mana ozugbo ike ahụ malitere, ị ga - agba ọsọ ọsọ ọsọ! Nsonaazụ ndị a na-eche na ị mejuputara aro anyị ma ị na-ezigakwa ọdịnaya dị mma. Agbanyeghị ogo ọdịnaya ahụ, ọrụ anyị ga - enyere aka, mana ogo dị elu karịa, ka mmapụta nsonaazụ ị ga - ahụ mgbe emejuputara atụmatụ anyị.
Ihe osise a na-ese na YouTube
Kedụ ka Ngwunye Channel Na-emewanye Ntanetị & Video thumbnails Nwere Ike Isi Nyere Aka My Channel?
Mmetụta izizi dị oke mkpa na ụwa ịntanetị. Ọ bụrụ na mmadụ bịara na chanel gị wee hụ ọkọlọtọ na vidiyo vidiyo nke na-adọta uche ha, ha ga-pịa bọtịnụ azụ azụ ngwa ngwa. Ọrụ ndị ọkachamara anyị na-arụ ga-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ị na-ebugo eserese ahụ wee hụ nkwalite "ụlọ ahịa" ọkachamara gị.
Kedu otu O siri dị mkpa iji hazie thumbnails Ndị Ọkachamara Ọkachamara?
Ọ bụrụ n ’ile anya, ị ga - ahụ na isi YouTubers niile na - eji obere vidiyo eji eme ihe iji mee ka vidio ha gbapụta na iji pịa ọtụtụ. Ogo, thumbnails omenala na-eme ka vidiyo gị pụọ na vidiyo ndị nwere ike ịnwe ọtụtụ echiche ma ọ bụ bụrụ ndị a ma ama karịa nke gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na vidiyo gị dị obere na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, thumbnail omenala ga-adọta uche ha wee gbaa ha ume ileta vidiyo gị.
Omenala thumbnails na - enyere aka melite ogo ogo YouTube na Google gi, si otua na --emere gi otutu ihe ahia.
Mba, anyị achọghị nzere nbanye gị. Anyị anaghị abanye na ọwa YouTube gị. Kama, anyi nyere gi eserese ka iwere bulie ha n’onwe gi. Ọ dị mfe na ị ga-achọ ịme mgbanwe ahụ n'onwe gị, ebe ọ ga - enyere gị aka ịmụta ma too dị ka YouTuber.
Ee! Anyị nwere ike ịmepụta eserese maka ụdị ọwa YouTube ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị niche ọdịnaya gị gbasara.
Gịnị ma ọ bụrụ na m na-adịghị amasị Design, Ma ọ bụ Chọrọ Mgbanwe?
Naanị Kpọtụrụ Anyị, kọwaa ihe ị ga-achọ ịhụ ka agbanwere na anyị ga-eme nyocha ahụ! Na njedebe, anyị chọrọ ka ị hụ ndịna eserese ị na-enweta n'anya ma tinye na ọwa YouTube gị.
Ọ nwere ike ịdị iche na-adabere na ebumnuche gị. Ohaneze, mgbe emejuputara eserese anyị, ị ga - ahụ nwayọ nwayọ n'oge ọnwa mbụ n'ihi na YouTube anaghị emelite nsonaazụ ozugbo. Mgbe ahụ, maka ọnwa ndị na - aga n'ihu, ike ahụ ga - ebuli ma gaa n'ihu na - eburu ọnwa n'ọnwa. Ọ dị ka ụgbọ njem… pụta ga-amalite nwayọ nwayọ, mana ozugbo ike ahụ malitere, ị ga - agba ọsọ ọsọ ọsọ! Nsonaazụ ndị a na-eche na ị mejuputa eserese anyị yana ị na-ezigakwa ọdịnaya dị mma. Agbanyeghị ogo ọdịnaya ahụ, ọrụ anyị ga - enyere aka, mana ogo dị elu karịa, ọ ga - arụpụta nsonaazụ kacha mma ị ga - ahụ mgbe emejuputara eserese anyị.